Ururka Jaamacadaha Soomaaliyeed oo $32,000 ugu deeqay Beledweyne | XORRIYA NEWS
Home Wararka Ururka Jaamacadaha Soomaaliyeed oo $32,000 ugu deeqay Beledweyne
Ururka Jaamacadaha Soomaaliyeed oo $32,000 ugu deeqay Beledweyne
Ururka jaamacadaha Soomaaliyeed ee marka magaciisa la soo gaabiyo loo yaqaan (ASU) ayaa deeq lacageed gaareysa $32,000 ugu deeqay Baladweyne.
“Waa la damqaneynaa waana lana dareemayeynaa xanuunka ay wajahayaan dadka reer beledwayne.”- Gudoomiye Dahir Hassan Carab
Ururka Jaamacadaha Soomaaliyeed ayaa kusoo biiray dadaalada loogu gurmanyo daadadka ku dhuftay Hirshabeelle State gaar ahaan magaalada Beledweyne.
Munaasabad lagu qabtay xarunta Wasaaradda Waxbarshada Hidaha iyo Tacliinta Sare ee dalka ayay ku wareejiyeen deeq lacageed oo gaaraysa 32,000 oo dollar si ay ugu biiriyaan dadaalada socda ee lagu moosayo daadadka iyo fatahaadaha khatarta galinaya mood iyo maalba.
Waxaa Munaasabadda ka soo qeyb galay Kusimaha Wasiirka, ahna Wasiiru-dowlaha Wasaaradda Waxbarashada Hidaha iyo Tacliinta Sare Agaasimaha Guud ee Wasaaradda, Agaasimaha Tacliinta Sare iyo qaar kamid ah guddoomiyaasha jaamacadaha xubnaha ka ah ururka.
Xubnihii ka socday jaamacadaha ayaa muujiyay sida ay mar walba diyyar ugu yihiin ka qayb-galka gurmadka loo fidinayo dadka Soomaaliyeed ee waxyeeladdu kasoo gaartay masiibooyinka dabiiciga ah into karaankooda.
Guddoomiyaha Ururka Jaamacadaha Dahir Xasan Carab oo kulanka hadal ka jeediyay ayaa sheegay in jaamacadaha Soomaaliyeed la damqayaan lana dareemayaan xanuunka ay wajahayaan dadka reer beledwayne xilligaan adag oo wadanku la tacaalayo cabuqa korona balse ay ayaga u dheertahay daadad iyo fatahaado.
Guddoomiyaha waxa uu intaas ku daray in Ururka Jaamacadaha Soomaaliyeed uu diyaar u yahey in uu ka qeyb-qaato daraasad cilmiyeed ku aadan fatahaada wabiyada Shabeelle iyo Jubba iyo daadadka oo saameeya gobollo iyo degaano badan oo dalka ka mid ah. Ugu dambayn, Gudoomiyaha ayaa Eebe uga baryay inuu dadkaas masaakiintaa u miciino, una fidiyo naxariistiisa balaaran.
Ku-simaha Wasiirka Wasaradda ahna Wasiiru-dowlaha Wasaaradda Cabdiraxman Jaabiri oo deeqada ka gudoomaya jaamacadaha dalka ayaa boggaadiyaya talaabada ay qaadeen isla markaana uga mahad celiayay garashada y garteen in ay u gurmadaan walaalahood dhibaataysan. Ugu dambayntii Wasiirku waxa uu balan qaaday in deeqdaan lagu wareejin doonaan guddiga gurmadka fatahaada ee beledwayne sida ugu dhaqsida badan.
Magalaada Beledweyn oo muhiim u ah isku socodka dadka, duunyada, waxsoosraraka iyo badeecadaha dalka waxey 30kii sano ee danbeysay la kacaa kufeysey waxyeelo ay geysteen daadad iyo fatahaado soo noq nodey kuwaasoo saameeyay nolol maalmeedka dadka reer Beledweyen.
Ururka Jaamacadaha Soomaliyeed ayaa ugu baaqay Dowladda Federaalka in xal waara u hesho musiibadan dabiiciga ah ee sanadlaha noqotey.